Akụkọ - Ndụmọdụ iji tufuo uwe gị n'oge COVID-19
Machị 20, 2020
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị na-anọ n'ụlọ ma na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya, enwere ọtụtụ ndị na-enweghị ndụ okomoko ahụ ma ha ga-ahapụ ụlọ ha maka ihe dịka ọrụ ma ọ bụ ịga ụlọ ahịa iji bulie ihe ndị dị mkpa. Yabụ, ọ bụrụ na ịnwere ịpụ apụ n'oge ọrịa COVID-19, ọ dị mkpa ịtụle ihe ị ga-eme ozugbo ịlaghachi. Ka ọ dị ugbu a, anyị maara na ịsa aka anyị ma ọ dịkarịa ala sekọnd 20 dị mkpa, dị ka disinfecting ihe njem dịka ekwentị gị, igodo, na kaadị akwụmụgwọ. Otú ọ dị, otu ihe anyị ejighị n'aka banyere ụbọchị ndị a bụ ihe anyị kwesịrị iji uwe anyị yi n'èzí.
Lee ụfọdụ ndụmọdụ:
Yipụ uwe gị ozugbo ị banyere n’ụlọ gị. Nke a ga - egbochi mgbasa nke nje nwere ike ịdị na uwe gị. Tinye akwa ndị ahụ ozugbo ka ha saa. Ọ dị mma iji uwe ndị ọzọ saa uwe ndị a.
Jiri mmiri kacha dị mma sachaa uwe gị (ọkacha mma karịa ogo 167) ma sachaa ihe niile. Banyere usoro ịsa akwa ahụ n'onwe ya, ọ bụ isi ihe na-echeta na ị na-akwọ aka gị tupu ị metụ ihe ọ bụla aka, yọọ uwe aka nwere ike ịchụpụ, wee saa aka gị ozugbo ozugbo ị wepụrụ ha.
A na - atụ aro ka ị dị ọcha ma kpochaa - nke bụ usoro abụọ dị iche iche - ebe ọ bụla ebe a na-edebe uwe ruru unyi, akwa linel, na akwa nhicha tupu ịsa, dị ka ọmụmaatụ, ihe mgbochi gị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ịtụnye akpa a na-atụfu otu akpa n'ime ihe ahụ karịa ịtụkwasị akwa na-adịghị ọcha n'ime ite ahụ ka a na-atụ aro.